KA WARAABI WARAABKA QASHINKA CAAGADAHA LEH GACMAHOODA - WARAABINTA
Ugu Weyn Ee Waraabinta
Sifooyinka samaynta waraabka faleebada ka soo dhalada caagadaha leh gacmahooda
Nidaamka waraabinta waraabka ayaa u oggolaanaya waraabinta waraabinta dhirta mid ka hooseysa xididka laftiisa. Wakhti yar oo aad ku qaadato, waxaad isku soo ururin kartaa nidaamka noocaan ah guriga, adigoon u baahnayn inaad iibsato qaybo qaali ah. Marka taxaddar leh, waraabinta ka soo dhalada caaga caaga ah, oo laga sameeyay gacmahaaga, waxay u adeegi doontaa dhowr sano.
Faa'iidooyinka isticmaalka waraabinta waraabka ee dalka
Faa'iidooyinka ugu muhiimsan ee waraabinta waraabinta ayaa helaya qadarka loo baahan yahay qoyaanka habka aasaasiga ah, iyo sidoo kale dadaal jirka ah oo yar iyo kharashaadka mugga. Noocida noocan ah waa mid xiiso u leh beeraleyda iyo beeralayda badan, maadaama nidaamka waraabka ee biyaha lagu daro aan lala joogin.
Ku waraabinta sariiraha leh dhalooyinka caaga ah waxay leedahay faa'iido weyn - waxay ku dhowdahay madaxbannaanida. Sidaa darteed, qofku uma baahna inuu la seexdo tuubo ama uu qaado mid ka dib baaldiyo culus oo lagu waraabiyo dhirta.
Waraabka feyradda ee baabuurta ah ayaa leh faa'iidooyin badan. Si waxtarkeedu sarreeyo, waxaad u baahan tahay inaad dooratid cajalad faleebo sax ah.
Nasiib darro, nidaamka waraabka ee la diyaariyey ee la diyaariyay, oo ku xiran biyo-dheelitir, waa qaali. Sidaa darteed, bannaanka iyo bannaanka u soo koray leh hab kale oo wanaagsan - in la isticmaalo dhalooyinka qadiimiga ah ee hore loo isticmaalo. Dabcan, ikhtiyaarkan ma ahan mid gabi ahaanba madaxbannaan, tan iyo marba mar waxaa lagama maarmaan ah in biyaha lagu daro weelka.
Laakiin, si kastaba ha ahaatee, sida waraabinta ayaa yareysa kheyraadka aadanaha, waad ku mahadsan tahay taas oo aad awoodi doontid in aad wax badan fiirsato arrimaha kale ama inaad waqti ku qaadato nasasho. Waraabinta waraabka adoo isticmaalaya dhalooyin caag ah ayaa leh kuwan soo socda faa'iidooyinka:
Looma baahna inaad wax iibsato. Dhalooyinka caaga ah waa wax laga heli karo meel kasta oo guri ah;
Si fudud loo fuliyo. Marka la raaco tilmaamo sahlan, wax waliba adiga ayaa sameeya, xitaa haddii aadan khibrad u lahayn abuuritaanka nidaamyadaas;
Kaydinta. Waraabinta noocan oo kale ah waxay si weyn u badbaadin kartaa wakhti iyo dadaal oo lagu bixiyo noocyada dhaqanka ee waraabka;
Hawlgab sahlan. Dhammaan waxa loo baahan yahay in la sameeyo waa in ay ku wareegaan beerta waxayna buuxiyaan weelasha biyaha;
Waraabinta qulqulka. Biyaha isla markiiba waxay hoos yimaadaan lakabka sare ee carrada, quudinta nidaamka xididka dhirta. Sidoo kale, biyuhu ma faafinayaan aag ballaaran oo uumi-bax u ah heerkulka sare xagaaga. Sidaa daraadeed, waraabinta guri-samaynta waxay dhiirrigelisaa horumarka buuxda iyo xoojinta nidaamka xididka dhirta;
Qaadid la'aan. Inta lagu jiro waraabinta tuubada godadka ee godadka inta badan waxay sameeyeen wax la yiraahdo "swamp". Waraabinta waraabka ayaa ka caawiya in laga fogaado tan;
Koritaanka cawska oo yaraaday. Sidoo kale, nidaamkani wuxuu u ogolaanayaa in uusan qoyin dusha sare. Sidaa darteed, xaaladaha wanaagsan ee aan loo abuurin koritaanka noocyada kala duwan ee haramaha, tanina, taasi waxay, u sahlaysaa daryeelka degaanka.
Nidaamkan waraabinta ayaa si khaas ah faa'iido u leh dadka deggan xagaaga kuwaasi, sababtoo ah duruufaha, waxay iman karaan dalka kaliya hal mar toddobaadkii. Xaaladdan, waxay u baahan yihiin oo keliya inay buuxiyaan weelka ka hor intaadan bixin. Qadarkaas biyaha ayaa noqon doona mid ku filan dhirta si aysan u baahnayn qoyaanka inta uu milkiiluhu ka maqan yahay.
Ma taqaanaa? Waraabka waraabka ee ka soo baxa dhalooyinka caaga ah ayaa ka shaqayn kara mabda'a daminta qoraxda, taas oo ku habboon xagaaga kulul. Si tan loo sameeyo, weel yar oo 1.5 litir oo biyo ah ayaa la dhigaa ciidda hore ee isku dhafan ee ku dhow dhirta, iyo dusha sare waxaa lagu daboolaa shimbir shan litir oo aan lahayn hoos. Marka la kululeeyo, qoyaanku wuxuu u beddelayaa uumi, taas oo qaabka dhibcaha ay ku degi doonaan derbiyada, ka dibna dhulka hoos u dhac. Sidaa darteed, xoog leh kulaylka, ka fiican ee ciidda qoyan doonaa.
Noocyada kala duwan ee nidaamka qashin qubka
Waxaa jira fursado badan oo ku saabsan sida loo sameeyo nidaam noocaas ah. Ugu horreyn waxaad u baahan tahay inaad tixgeliso dhammaan xulashooyinka, ka dibna dooro kuwa ugu fiican, oo ku saleysan kartidooda iyo xaaladooda.
Sidoo kale, ha ilaawin inaad u baahan tahay inaad si taxadar leh u xulato goobta dhalada iyo xoogga biyaha. Nidaamyada kala duwan waxay ku habboon yihiin nidaamyo beereed oo kala duwan, waana in had iyo jeer ay maskaxda ku hayaan.
Habka ugu fudud ee aad naftaada u sameysid waa inaad daloolin dalool yar oo hoose ee taangiga kuna dhig meel u dhow dhirta. Uma baahnid diyaarin gaar ah, laakiin waxaad u baahan tahay tixgeli waxyaalaha soo socda:
godka waa inuu ahaadaa mikroscopic. Si arrintan loo sameeyo, ku dheji weelka irbadda. Daloolo weyn ayaa waxay keeni doontaa isticmaalka biyaha degdegga ah, taas oo joojinaysa mabaadi'da waxtarka iyo madaxbannaanida;
kororka tirada godadka waxay kuu ogolaaneysaa inaad abuurto jawi qoyan oo dheeraad ah;
weelku waa inuu ku yaallaa meel u dhow suurtogalka suunka si ay biyuhu si toos ah ugu socdaan nidaamka xididka;
Awooddu waxay noqon kartaa wax yar oo prikopat ah oo ku xigta geedka. Tani waxay ka hortagi doontaa biyaha luntay;
weelka waxaa lagu dari karaa si toos ah kor uga kaca geed, haddii ikhtiyaar noocaas ah ay ku habboon tahay dhaqankan;
Awoodda 5-10 litir ayaa kuu oggolaanaysa in aad ka baxdo beerta adigoon fiiro gaarin toddobaadkii, taas oo si gaar ah muhiim ugu ah dadka degan xagaaga ee ku nool meel ka fog aqalada.
Isticmaalka dhalooyinka caaga ah ee waraabinta waxay ku dhacdaa nidaam fudud oo fudud - sababtoo ah xidhiidh toos ah oo biyaha la socda. Biyaha ayaa billaabanaya inay si tartiib tartiib ah u soo dhex socdaan, dhulkuna waxay xiraan godadka ka dib markii ay qoyaan. Ka dib marka dhulku mar kale maro, godadka ayaa furi doona, biyuhuna waxay bilaabi doonaan inay mar kale ku qulqulaan xididdada dhirta.
Sidaa darteed, waxaa jira xeerar dabiiciga ah ee qoyaanka ee ciidda. Haddii ciidda si ku filan u buuxsanto, ka dibna si fudud uma nuugayso qoyaanka xad-dhaafka ah. Ka dib markii taangigu madhan yahay, waxaad u baahan tahay oo kaliya inaad ku shubtid biyaha.
Waa muhiim! Waraabka faleebo ka soo dhalooyinka caaga ah ma ku habboon yihiin dhirta dhirta leh ee xididdada khafiifka ah.
Sida loo sameeyo waraabka waraabinta (awooda prikannaya ee ku xiga geedka)
Si aad u sameysid waraabinta dhalooyinka adigoo ku dhajinaya dhirta, waxaad u baahan tahay inaad raacdo tilmaamaha sahlan. Dhalada kasta waa in lagu rakibo qoorta, u daadiyaan dhul yar oo xasilooni weyn leh.
Waxa kale oo lagama maarmaan ah in la sameeyo hal god yar oo hoose ee dhalada, si loo fududeeyo ka bixitaanka biyaha (hawada ayaa cadaadin doonta biyaha oo si tartiib tartiib ah u soo degaysa). Daboolka waa inuu noqdaa mid dabacsan si loo hubiyo in si tartiib tartiib ah loogu dhufo biyaha.
Si aan weelku u daboolin dabaysha, waa in lagu aasaa ciidda si qoto dheer oo qiyaastii 10-15 cm. Waa in la ogaadaa in ay suurtagal tahay in si sax ah loo dhigo dhalada marka la beero, marka weelka lagu aaso god isku mid ah sida geedo.
Haddii dhirta horeba si fiican u koray, ka dibna daloolka waa in la dhigaa fogaan ah ugu yaraan 15 cm laga bilaabo asliga ah ee geedka. Waxaa lagama maarmaan ah in aad si taxadar leh u dhaqanto, si aanay u waxyeeleynin nidaamka xididka geedka. Haddii, yaanyo yaryar oo loo maro dhalooyin caag ah lagu fuliyo ciidda dhoobada ah, ka dibna marka qoyan, si sahlan ayaa loo xiri karaa gudaha godadka.
Si looga hortago, tan dibadda ah ee tuubada waa in lagu adkeeyaa naas-nuujinta fudud, ama waa in la dejiyaa hoosta godka leh cawska ama gabal dhejis. Daboolka ayaa si adag u xoqan, dhalada ayaa la dhigaa qoorta oo hoos u foorarsatay dabadeedna ceel ayaa lagu daboolay dhulka. Xagasha wanaagsan ee jilicsanaanta waa 30-45 °.
Waxaa jira hab kale oo loo habeeyo waraabinta waraabinta qajaarka ee dhulka furan. Iyada oo laga caawinayo dharbaaxada taangiga waxaad u baahan tahay inaad ka samayso meelo badan. Waxay ku jiraan 5-6 saf, iyo masaafada u dhaxaysa saf ah waa 2 cm.
Dhalada caaga ah waxaa lagu aasaa meel qumman oo qoorta kor u haysa isla godka sida geedo. Dhibaatada ugu weyni waxay tahay in weelku u baahan yahay in la buuxiyo qoorta dhuuban. Laakiin waqti isku mid ah biyaha laga bilaabo taangiga si aan caadi ahayn uumi ma'aha. Sababtoo ah xaqiiqda ah in ku dhawaad ​​dhammaan weelka dhulka hoostiisa ku yaal, xataa dabayl xoog badan ma awoodi doonto in ay ku afduubto. Haa, iyo dhulka laftiisa sababtoo ah waxay u muuqan doontaa mid soo jiidasho leh.
Waa muhiim! Biyaha waa in aan isla markiiba tagin ciidda. Nuxurta qoyaanka dhibcaha ahi waa isticmaalka tartiib tartiib ah ee biyaha dhawr maalmood gudahood.
Dhalo waraabinta miisaanka
In la abuuro dibadda ku dar faleebo waraabka lagu koriyo oo leh gacmahooda u baahan doonaa:
wax kasta oo caag ah;
ciriiriga ama ciddiyaha khafiifka ah;
xadhig ama xarig.
Doorashadani waxay ku habboon tahay dhirtaas, oo ku xiga taas oo ay jirto wax taageero ah. Xitaa haddii uu maqan yahay, ka dibna dejinta dhirta u dhexeeya dhirta ma noqon doonto dhibaato weyn. Si aad u sameysid waraabin dhibco yar, waxaad u baahan tahay:
hoos u gooyay, hoos u dhig;
Fogaansho 1-2 cm oo ka soo gooyay dhinaca hoose ee dhalooyinka ka soo baxa dhalada, samee laba godad. Iyada oo loo marayo godadkaas waxaad u baahan tahay inaad ka gudubto xarig ama xadhig, taas oo ku xirnaan doonta taageerada. Ku daboolka dhalada waxaad u baahan tahay inaad sameyso dalool yar. Haddii ay dhacdo heerka socodka biyaha waa mid aad u gaabis ah, daloolka ayaa si yar loo balaarin karaa;
Dhar dhalada ka baxsan geedka.
Markaad waraabiyo yaanyada aqalka dhirta lagu koriyo ee caaga ah, nidaamka cayrinta wuxuu leeyahay laba faa'iido: fududeyn soo saarid iyo karti-u-qaadsiin-ku haboonaanta xoogga waraabka.
Ma taqaanaa? Hal dhalo oo laba litir ah ayaa awoodi kara in ay qoyaan laba madax oo ah warshad noocan oo kale ah sida kaabajka.
Si loo sameeyo waraabka dhirta lagu koriyo oo lagu caawiyo dhalooyinka iyo ul, waxaad u baahan tahay:
Qaado tuubo caag ah oo leh dhexroor yar. Udubka caadiga ah ee qalinka wadajirka ah, oo aad marka hore u baahan tahay inaad ku dhaqdo shidaalka ama khafiifiya, waxay kaa saartaa haraaga macmacaanka iyo walxaha qoraalka laftiisa;
Ku dhaji hal dhammaadka tuubada tubada. Haddii ay tahay xarig laga bilaabo gacanta, markaas ciyaarta ama cadayga ayaa si fiican u shaqeynaya;
Ku dheji dhammaadka kale qoorta. Waxa kale oo aad gooyaa daloolka daloolka la rabo ee furka fiilada ku xir oo ku xir tuubada;
Ku xir tuubada tuubada ku dheggan qoorta. Tan waxaa lagu sameyn karaa iyadoo la adeegsanayo dhoobo caadi ah, cajalad iyo habab kale oo la macquulsan yahay;
Ku samee godad cirbadda ah dhamaadka tuubada. Waa inay noqdaan sida ugu dhow ee ugu suurtogalka ah. Tirada godadka iyo dhexroorkooda waxaa loo xushay si gooni ah, iyada oo ku saleysan xoogga loo baahan yahay qoyaanka. Dhibic yar oo biyo ah ayaa socon doonta dhowr daqiiqadood;
Iska yaree hoose ee dhalada oo u dhig qoorta ciidda hoos;
Ku shub biyo dhalada.
Waxa kale oo aad tuubada ku dhejin kartaa derbiga dhalada hoose ee hoose. Tani ma gooyn doonto dhalada, wayna fududahay inaad u guurto dhulka. Ku waraabinta aqalka dhirta lagu koriyo ee dhalooyinka ku jira ayaa faa'iido weyn leh - dhererka tuubada, dhalada waxaa lagu dhajin karaa meel u dhow dhirta.
Haddii aad dhalo ku shubeyso inta u dhaxeysa dhowr duurka, markaa waxaad u dhaqaaqi kartaa tuubada isla markaana waxaad ku waraabin kartaa geedo.
Waa muhiim! Haddii aad dooratid inaad ku nuuxnuuxsato tuubo lagu geliyo derbiga, ka dibna ha ilaawin in aad si adag u xir xiraha dhalada leh. Tani waxay ka hortagi doontaa uumiga degdegga ah ee biyaha.
Waraabka waraabka ayaa sameeya adiga (ku dheji dhalada caaga ah)
Bannaanka u khibrad leh waxay ku talinayaan in ay isku dayaan ikhtiyaarka ah waraabka faleebo, kaas oo dhalada lagu aasi karo gebi ahaan dhulka. Xaaladdan, waxaad u baahan tahay inaad sameysid meelo dhowr ah sida ugu dhow ee suurtogalka ah ee hoose. Ka dib markaa, dhalada waxaa lagu aasay dhulka, dusha sare waxaa ku yaala oo keliya qoorta kaas oo biyaha la daadin doono.
Waxaa haboon in la ogaado in habkan loo isticmaalo waraabka faleebo bixiya qoyaan yar, iyo tani ma aha mid ku habboon dhirta oo leh diidmo dheer.
Waraabka faleebaysan ee qashinka ah: dhammaan khayraadka iyo xayawaanka
Sida noocyada kale ee waraabinta, waraabinta faleebadu waxay leedahay faa'iidooyin iyo faa'iido daro. Waxyaabaha ay ka mid yihiin faa'iidooyinka laga qabo in la ogaado waxyaabaha soo socda:
samee waraabka qulqulaya adoo isticmaalaya dhalooyin caag ah adoo awoodda qof kasta. Nidaamka wax soosaarista uma baahna haysashada aqoon iyo xirfad gaar ah;
abuurista nidaamka waraabka faleebada ee dhalooyinka caaga ah uma baahna maalgelinta ilo dhaqaale oo waaweyn. Tani waxay xaq u leedahay xaqiiqda ah in dhalooyinka caagga ah ay yihiin kuwa ugu caamsan oo raqiis ah oo dib loogu warshadeeyo;
mabda'a ficilka waraabka faleebada si gebi ahaanba gabi ahaanba u baabi'iyay qodobka isticmaalka qashinka biyaha. Tani waxay si gaar ah u tahay runta marka goobta aysan helin nidaamka biyaha ee dhexe;
biyaha laga helo dhalooyinka caaga ah waxaa loo qaybiyaa si siman sida ugu suurtogalka ah waxaana si tartiib ah u qallajisa nidaamka xididka geedka;
ee dhalooyinka caaga ah, biyaha ayaa si degdeg ah u kululaanaya heerkulka raaxada ee geedaha badankooda;
Nadiifinta caagga ah ee tuubada ayaa si fudud loo rakibi karaa, burburin karaa ama loo beddeli karaa.
Waraabinta waraabka ayaa sidoo kale loo isticmaalaa marka la kordhiyo dhirta kala duwan: yaanyada, qajaarka, cowska, canab iyo xitaa geedo tufaax ah.
Hase yeeshee, tan oo kale, waxaa jira qaar faa'iido darrida isticmaalka nidaamka waraabka oo isku mid ah:
Nidaamka noocan oo kale ah ma awoodi doono inuu bixiyo biyo tayo sare leh aag ballaaran;
waraabinta waraabinta ka soo dhalada caagadaha 5-litir ee caag ah ma awoodi doonaan in ay gabi ahaanba bedelaan waraabka buuxa, sababtoo ah waraabka faleebadu wuxuu u oggolaanayaa oo kaliya in uu ilaaliyo heerarka loo baahan yahay qoyaanka;
marka la isticmaalo xayawaan ama dhoobo culus, nidaamka dhibicda ka soo dhalaalaya si dhakhso ah ayuu ufudud u noqdaa oo joojiyaa shaqaynta.
Ma taqaanaa? Ereyga qallajinta dhammaystiran ee dhalada lafaarta caag ah ayaa ka badan boqol sano.
Waraabka faleebada ka soo dhalada caagadaha waa bedel wanaagsan, mararka qaarkood, beddel buuxa ee waraabka dhaqanka. Isku day inaad dalbato waraabinta waraabinta beertaada ama aqalka dhirta lagu koriyo laguma adkaan doono, maadaama maaddooyinka lagama maarmaanka ah ay markasta gacanta ku hayaan.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Waraabinta 2020